Gelle oo markii Shanaad loo caleema saarayo madaxweynaha Jabuuti. | XAL DOON
Home NEWS Gelle oo markii Shanaad loo caleema saarayo madaxweynaha Jabuuti.
Gelle oo markii Shanaad loo caleema saarayo madaxweynaha Jabuuti.
Madaxeynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta oo Sabti ah 15-ka May 2021 lagu caleemo-saarayaa Caasimadda Dalkaas sida uu shaaciyay Guddiga Madaxtooyada u xilsaartay qaban-qaabada munaasabadda.
Dhanka Soomaaliya Waxaa ka qaybgalaya Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya iyo wafdi Wasiiro ah oo Jimcihii Muqdisho ka raacay maadaama uu ka baaqday Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Doorashadii ka dhacday Jabuuti 10-kii April 2021 waxaa markii shanaad oo xiriir ah ku guuleystay Ismaaciil Cumar Geelle oo helay codad dhan in ka badan 98% waxa ay taasi u xoojisay in uu xafiiska sii joogo.
Guddiga Doorashada Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegay in tirada codeysay in ay dhan tahay 167,535-ruux, markii la tiriyay uu Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle helay boqolley ahaan 98.58%halka Musharax Sakariye Ismaaciil Faarax uu helay 1.42%.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Madaxweynaha Jabuuti noqday 1999-kii, waxa uu dalkiisa u horseeday waxqabad muuqda, isbadal Ganacsi, is dhexgalka Dalalka kala duwan ee Caalamka & martigelinta shirar kala duwan oo intooda badan uu u qabtay Soomaalida.